Kunamata Points YeRuponeso | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points YeRuponeso
Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi eRuponeso. Ruponeso rwemurume wese ibhizinesi rakakosha. Mwari haatambe neruponeso rwemunhu, saka munhu anofanira kuedza kuzvikoshesa. Kristu aifanira kuuya pasi pano aine chimiro chevanhu, akaiswa pasi penzara nekurwadziwa, anodiwa nevashoma uye achivengwa nevazhinji. Akasekwa, akatorwa, akarohwa uye akaurayiwa. Dai ruponeso rwusina kukosha Mwari angadai asina kuisa Mwanakomana wake mumwechete kuti atambure zvakanyanya. Dai zvaive zvisina kukosha, kunyangwe Kristu angadai asina kuzvibvumira kunyadziswa zvakanyanya kusvika padanho iro.
Ruponeso zvinoreva kuponeswa kubva musimba rezvitadzo uye nehuranda. Zvinotora kuedza kwakasimba kubva kumurume kuti uponeswe kubva kuzvivi. Izvi zvinodaro nekuti dhiabhori achaita zvese zvinobvira kuti ave nechokwadi chekuti munhu anoramba achiramba ari muranda wechivi kuti mweya wemunhu urasike. Nekudaro, isu tinopa mbiri kuna baba kudenga nekutipa chipo chakakosha chaKristu chekuti chero munhu anotenda maari arege kufa asi ave nehupenyu husingaperi.
Rugwaro runoti mubhuku ra Johani 3: 16-17 Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Ruponeso rwakaunzwa kurudzi rwemunhu kubva murudo rusingaenzaniswi rwaMwari. Nekuti Mwari vaisada kuti murume aparare ndosaka vakatuma Mwanakomana wavo kuti afire zvivi zvemunhu.
Kuti isu tive neruponeso, tinofanira kupupura Kristu saIshe wedu chaiye uye muponesi. Tinofanira kutenda musimba rekusimudzira kwake uye isu tinofanira kurega kubva kuchivi chedu. Ruponeso harusi rwechimwe-nguva-chinhu, icho chinhu chinofanirwa kuchengetedzwa nguva dzese. Chokwadi chekuti waponeswa nhasi hazvireve kuti waponeswa zvachose. Ndosaka rugwaro rwuchiti mubhuku ra 1 Vakorinte 10: 12 Naizvozvo uyo anofunga kuti akamira ngaachenjere kuti arege kuwa. Ndosaka tichifanira kugara tichizviongorora nguva dzese kuti tione kuti takamira naMwari.
Tichave tichipa aya manamatiro evazhinji vakaupotsa, kune vakawanda vakatsauswa nemiyedzo yehupenyu. Ino ndiyo nguva yekudzokera kuna Mwari pakupedzisira. Taura minamato inotevera yeruponeso rwako.
Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione zuva idzva. Ndinokutendai netsitsi dzenyu nekupa hupenyu hwangu, zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Ishe, ndinonamatira kuregererwa kwezvivi zvangu. Ndinokumbira kuti nechikonzero cheropa rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, usuke zvivi zvangu nezvakaipa zvangu muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti, kana chitadzo changu chakatsvuka serutsvuku, zvichaitwa chena kupfuura chando, kana zviri zvakatsvuka kuti piriviri, zvichaitwa chena kupfuura mvere. Ishe, ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu mundishambidze zvakakwana kubva pazvivi zvangu.
Ishe Jesu, ndinoreurura nhasi kuti ndimi ishe wangu chaiye uye muponesi. Ndinonamata kuti muuye muhupenyu hwangu. Nhasi, ndinotsaurazve hupenyu hwangu kwauri. Huya muhupenyu hwangu. Ndinoita kuti mukova wehupenyu hwangu usvike kwauri ishe Jesu, ndinokumbira kuti muite hupenyu hwangu imba yenyu.
Ndinokukoka iwe mumba mangu, ndinonamata kuti uuye utore imba yangu nhasi. Ndinokumbira kuti ugare mumba mangu uye wadzinga mweya yese yakaipa, mweya yese yedhimoni yanga ichigara neni kuti undiendese kugehena, ndinonamata kuti uvadzinge muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti muzondishanyira nhasi nesimba remweya mutsvene. Ndinonamata kuti simba reMweya Mutsvene richagara kubva mumoyo mangu nhasi. Ini ndinoramba kuramba ndichirarama hupenyu hwangu zvichibva paruzivo rwekufa. Ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu muite hupenyu hwangu musha mutsva wemweya mutsvene. Mweya washe unonditungamira nekunditungamira kuti ndiende nenzira ipi, ndinokumbira kuti ugare muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, nekuti zvakanyorwa kuti mirai makasimba murusununguko, izvo izvo Kristu zvaakatisunungura nazvo, musasungwazve nejoko reuranda. Ndinoramba kuva muranda wechivi zvakare. Ndinonamata kuti mweya washe unonditungamira nekundikurudzira muchikamu chakakodzera kuti ugare mandiri kubva nhasi. Ndinoramba kurarama hupenyu ndega. Ndinoda kutungamirirwa nemweya waMwari.
Chinyorwa chinoti Kune vese vanotungamirirwa neMweya waMwari, ndivo vana vaMwari. Ndinoda kuva mwanakomana wako. Ndinonamata kuti mweya wenyu unditungamirire kubva nhasi. Ndichaenda chete kwaunonditi ndiende, handidi kudzokera kuuranda zvakare. Simba rega rega nehukuru hunoronga kuba chipo chitsva ichi kubva kwandiri, chinowira kurufu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinopesana nemhando dzese dzemuyedzo dzinogona kuda kundidzosera muchivi. Nekuti zvakanyorwa mubhuku ra1 vaKorinde 10: 13 Hapana muedzo wakakubata iwe kunze kweinozivikanwa nevanhu; asi Mwari vakatendeka, vasingatenderi kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo, asi pamwe nemuedzo uchaitawo nzira yokupukunyuka nayo, kuti mugone kuutakura. Wakavimbisa kuti haungatenderi chero muyedzo kundikunda, ndinokumbira kuzadzikiswa kweshoko iri netsitsi dzaKristu.
Ishe, pandiri kuramba ndichikura muna Kristu Jesu, regai nditange kuona hunhu husina tsarukano hwehukama nemi. Nzvimbo yega yega yehupenyu hwangu iyo muvengi aparadza hukama huripo pakati pedu, ndinogadzirisa nzvimbo idzodzo muzita raJesu.
Previous nyayaAnesimba Anonamata Points Yeakanaka Husiku Kurara
inoteveraKunamata Points Kwemwedzi weEmber
30 Pekutanga Minamato Yekunamatira Mato ehondo Yemweya.